Ii-FAQs - iVecano Electronics Co, Ltd.
Xa umqondiso weselfowuni usebenza, ezinye iiselfowuni zibonisa umqondiso. Kutheni le nto?
Xa ifowuni yokukhusela ifowuni isebenza, kukho iindlela ezimbini zokubonisa iselfowuni:
Eyokuqala kukuba ifowuni ephathekayo inokuqhagamshelwa. Ukuba iselfowuni inokudityaniswa, oko kuthetha ukuba indawo ekhuselayo ayikafikeleli kukhuselo olusebenzayo kwaye kukho ukuvuza. Ke oko kukwathetha ukuba imveliso yakho yangoku ekhuselayo yefowuni ayinakho ukuhlangabezana neemfuno zokukhusela indawo yakho;
Inye kukuba iselfowuni ayinakunxibelelana. Ukuba kunjalo, oko kuthetha ukuba ifowuni ephathekayo ikwisimo esibucayi, kwaye oku kuyenzeka kwiifowuni eziphathwayo ezinokuthintela ukuphazamiseka kunye nokuziva okuphezulu.
Ngaba ndingasasaza i-Intanethi emva kokuba ifowuni yesikolo ivaliwe?
Kule mihla, izikolo ezininzi ziye zafaka izixhobo zokukhusela iifowuni eziphathwayo. Emva kokuba ukhuselo luvuliwe, ngaba iqela labafundi lisaya kwi-Intanethi?
Ngokubanzi, zintathu iindlela zokujonga i-Intanethi kwiiselfowuni.
Indlela yokuqala kukujonga kwi-Intanethi ngokusebenzisa imiyalezo yomnxeba. Nje ukuba isixhobo sokhuselo sivuliwe, iselfowuni ayinakufumana umqondiso womqhubi, okhokelela kukungakwazi ukwenza iminxeba okanye ukuthumela imiyalezo, kwaye ngokwendalo ayinakho ukufikelela kwi-Intanethi. Ukukhusela kuyasebenza.
Indlela yesibini kukudibanisa iselfowuni kwiWIFI kwi-Intanethi. Ukuba unethamsanqa ngokwaneleyo, i-jammer ayinawo umsebenzi wokukhusela ijelo le-2.4gwifi, ke ndiyavuyisana nawe, nangona ungeke ukwazi ukufowunela nokuthumela imiyalezo, kodwa ndinenethiwekhi emhlabeni, i-QQ kunye ne-WeChat ilizwi kunye nevidiyo zisenako ukwenziwa, ukubukela iimovie kunye nokudlala imidlalo akukho ngxaki. Nangona kunjalo, ukuba isixhobo sokukhusela sixhasa umsebenzi wokukhusela i-wifi, i-Intanethi ayinakufikeleleka kule meko, kwaye ukukhusela kuyasebenza.
Indlela yesithathu kukuhambisa izibuko le-LAN yenethiwekhi ngqo kwifowuni ephathekayo. Le ndlela ifana nokungena kwihlabathi elingenamntu, njengekhompyuter eqhagamshelwe ngokuthe ngqo kwintambo yenethiwekhi, nokuba ikhaka liyavulwa na okanye hayi, akukho siphazamiso, kwaye isantya senethiwekhi sihamba kakuhle. Kodwa ukuba akukho lujongano lwe-LAN kuthungelwano lwangaphandle, ayizukubizwa mihla le, kwaye ayizukusebenza.
Ngayiphi na imeko, owona msebenzi uphambili njengomfundi kukufunda, ukusebenza nzima kwaye ufunde nzima, ikamva lakho likamva le-motherland.
Kutheni kungekho siginali jammer kwindiza?
Nangona i-jammer yomqondiso ibizwa ngokuba ngumqondiso "jammer", sisiginali "jammer" kunye nejammer enamandla amakhulu.
Isizathu sokuba iifowuni eziphathwayo zingasetyenziswa kwiinqwelomoya kukuthintela imiqondiso yeeselfowuni ekuphazamiseni unxibelelwano lwenqwelomoya. Ukufaka i "jammer" kuthetha ukufaka umthombo omkhulu wokuphazamiseka. Ke ngoko, akuyi kubakho sixhobo kwi-moya!